UNeil Berman, umsunguli, kunye ne-CEO yeDelivra, kuyacaca ukuba uqoqosho lwe-e-commerce lwanamhlanje lushiya umnyango uvulelekile kubanikezeli abaninzi beesoftware ukuze banikezele ngempumelelo kwiimfuno zabathengisi ngaphakathi kwisithuba.
Ayisiyomfihlo ukuba abathengisi abaphezulu behlabathi banokwamkela isoftware yokuthengisa kunye ne-imeyile kuba banamaqela amakhulu, azinikeleyo e-commerce ukuze afunde isixa esikhulu semisebenzi yokusebenza ngokufanelekileyo. Kukwakho abathengisi abaninzi be-Intanethi kunye nabommandla be-Intanethi ngaphandle kweqela lokuthengisa elizinikeleyo kwiimeko ezininzi. Kubalulekile ukuba aba bathengisi benze imali ngempumelelo kwi-imeyile abazisa kuyo nge-e-commerce, kodwa banesidingo seqonga elinikezela ngokubaluleka kokusebenziseka kunye nokusetyenziswa kwangoko.
Olunye uphawu oluphambili kukukwazi ukwenza "umcimbi ophawulweyo" ngokusekwe kuthengiso oluthunyelwe ngeposi, ukuvumela abasebenzisi ukuba "basete kwaye balibale" amaphulo azenzekelayo ngelixa ulawula ixesha kunye nomyalezo wonxibelelwano olunxulumene nezorhwebo. Iminyhadala ephawulweyo ivumela umthengisi ukuba avavanye iikhrayitheriya, kwaye isebe inyathelo lokuhamba komsebenzi kwiindlela ezimbini. Umzekelo, umthengisi unokukhetha ukuphonononga ukuba ngaba umamkeli uyivulile i-imeyile, ucofe kwikhonkco elithile, ethengwe kwivenkile ye-e-commerce, njl. kumamkeli, ngokusekwe kwisenzo sangaphambili somamkeli okanye ukungasebenzi. Umthengisi unokukhetha ukuthumela ii-imeyile ezahlukeneyo, ukuhlaziya iinkalo zedatha okanye ukuthumela imiyalezo yeSMS.